Pirlo: Sannadkii 2005 Kubadda Ayaan Ka Fadhiisan Gaadhay
HomeWararka MaantaPirlo: Sannadkii 2005 Kubadda Ayaan Ka Fadhiisan Gaadhay
14/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Andrea Pirlo ayaa daboolka ka qaaday in uu ku dhawaaday in uu ciyaaraha ka fadhiistay sannadkii 2005 markii ay Liverpool ka qaadday koobka Champions League.
Laacibkan khabiirka ku ah khadka dhexe ayey kooxdiisii wakhtigaas ee AC Milan ay ciyaarta qaybtii horeba ku hoggaamineysay 3-0 laakiin Liverpool ayaa mucjsio samaysay kadib markii ay 3 gool la timid qaybtii dambe, waxaana ciyaarta oo lagu daray wakhti dheeraad ah ay ku dhamaatay 3-3, iyadoo rikoodheyaashii la dhigayna ay Liverpool ku guuleystay.
Gool-hayihii Liverpool ugu jiray goolka ciyaartaas ayaa ka qabtay rikoodhe Pirlo, iyadoo uu Andriy Shevchencko goolka garab mariyey kubbaddiisii, waxaana sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay guushaas muhiimka ah u damaashaaday Liverpool.
Pirlo oo arrintaas ay wax ka weydiisay Tuttosport ayaa waxa uu sheegay in uu maalintaas go’aansaday in uu ka fadhiisto dhamaan ciyaaraha, waxaanu yidhi: “Waxay ahayd maalintii aan ka fogaaday kubadda cagta ee ay maskaxdayda ka soo go’day in aan ka fadhiisto.”
Pirlo waxa uu sheegay in guul darradaas ka soo gaadhay faynalkii Champions League ee Istanbul ay kaga tagtay murogo sabab u noqon gaadhay in uu gebi ahaanba ciyaaraha ka fadhiisto.
35 jirkan oo lagu tilmaamo mid ka mid ah kubbad sameeyeyaasha dunida ugu wanaagsan, ayaa waxa uu sannad ka dib guul darradii Champions League kula guuleystay xulka qarankiisa Koobkii adduunka ee 2006 lagu qabtay wadanka Germany, sannadkii xigay ee 2007 waxa uu kooxdiisa AC Milan kula guuleystay Champions League, isaga oo sannadkii 2011 ka tegay naadigaas kuna biiray Juventus oo uu iyadana kula guuleystay dhawr horyaal.
Paris St G Oo Dirqi Iyo Tu Xun Kaga Guuleysatay Koox Horyaalka Heerka Afraad Ee Faransiiska Ah
Benitez Oo Dirqi Kaga Baxsaday In Gacanta Loola Tago, Feedhna Lagu Miiso Garoonka Dhexdiisa
22/04/2016 Abdiwahab Ahmed
Video : Xidhiidhka Kubada Cagta Oo Go’aan Ka Soo Saaray Mashaqadii Kulanka Awdal Iyo M.Jeex